Soo Iibso Budada Digirta Cagaaran 98% Soosaara Miisaanka Lumid - Rar bilaash ah & Cashuur la'aan | WoopShop®
$ 43.54 qiimaha joogtada ah $ 45.83
Cannabada Beerka Cagaaran ee Cagaarka ah 98% Kala saarista Dhimashada Miisaanka gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Number Model: Digirta Qaxwaha Cagaaran
Nooca: Digirta Qaxwaha Cagaaran
Nooca: Jilicsanaanta Cream
Nooca Product: Soo bixista Kafee Beega Cagaaran
Fasalka: Cuntada Grade
Shelf Life: 2 sano
Color: U khafiif budada khafiifka ah ee jaalaha ah
Baako: Drum, Weelka Weelka
Soosaarida Bean Cagaaran Cagaaran waa walax laga soosaaray digirta qaxwada cagaaran ee aan la karin. Soosaarka waxaa kujira iskudhafyo badan oo polyphenolic ah sida chlorogenic acid. Kuwani xeryahooda ayaa la ogaaday in ay leeyihiin guryaha antioxidant awood badan. Digirta kafeega cagaaran ee aan la dubin ayaa ah ilo aad ugafiican antioxidant-ka marka loo eego digirta kafeeka la dubay. Soosaarida digirta cagaaran ee cagaaran waxaa laga sameeyaa digirta cagaaran ee aan la karin ee Coffea Arabica L, oo ​​nafaqadeeda aan la baabi'in qiimaha nafaqadiisuna ka sareyso kafee la dubay. Bean kafeega cagaaran wuxuu leeyahay anti-oxidant xoog leh iyo uruurinta duubista oo xakameysa. Ka hortaga antioxidants-ka ee laga soosaaray digirta cagaaran ee kafeega ah waxaa loo yaqaan 'chlorogenic acids'. Waxay u shaqeysaa sidii maaddada kor u qaadista iyo caafimaadka. Chlorogenic acid ayaa la muujiyey inay saameyn lid ku ah safka gulukooska sidoo kale waxaa la ogaadey inuu si weyn u daahiyo qaadashada gulukooska ee xiidmaha yar. Daraasado la sameeyay ayaa lagu ogaaday in acid chlorogenic ay yareyneyso halista cudurka macaanka nooca II, wuxuu yareeyaa cadaadiska dhiigga wuxuuna la dagaalamaa caabuqa Soosaarida digirta cagaaran ee qaxwada sidoo kale waxay ufiican tahay sameynta isboorti maxaa yeelay waxay ka shaqeyn kartaa inay kiciso soosaarka cortisone iyo adrenaline ee jirka taasoo keeneysa adkeysi. Cilmi baarisyada qaar waxay soo jeedinayaan inay xitaa caawin karto kahortaga cudurada sida cudurada wadnaha adoo ilaalinaya halbowlayaasha caafimaadka. function:
Sida antioxidant-ka leh firfircoonida ka hortagga kansarka, ayaa sidoo kale gaabinaysa sii-deynta gulukoosta dhiigga ee dhiigga kadib cuntada ka dib.
Hoos u dhig heerka sonkorta dhiigga qofka, cabudhi cuntada, hoos u dhig cadaadiska dhiigga, hoosna u dhig heerarka dufanka visceral
La dagaallanka xagjirnimada xorta ah ee jirkeenna dhaawici kara unugyadayada, waxay gacan ka geysan karaan xaaladaha sida cudurrada wadnaha.
Waxaa lagu dabaqayaa goobta cuntada, kafeeku waa cuntada ugu caansan dadka dhexdooda.
Waxaa lagu dabaqay qeybta dawooyinka, in loo isticmaalo sidii alaab cayriin ah si loo naaquso dhiigkarka.
Waxaa lagu dabaqay maaddada la isku qurxiyo, saliidda digirta cagaaran waxay si wax ku ool ah u habeyn kartaa maqaarka, kicin kartaa jihada waxayna kicin kartaa ruuxda.